डाक्टर केसीको १७ औं अनसन सुरु
मुख्य पृष्ठसमाचारडाक्टर केसीको १७ औं अनसन सुरु
डडेलधुरा १८ कात्तिक । चिकित्सा क्षेत्रमा सुधारको माग गर्दै डाक्टर गोविन्द केसीले फेरी अनसन सुरु गरेका छन् । केसी डडेलधुरा पुगेर अनशनमा बसेका हुन् ।
उनले सोमबार(आज) साँझ ५ बजेदेखि १७औं सत्याग्रह सुरु गरेका छन् । डाक्टर केसी डडेलधुरा जिल्ला अस्पताल नजिकै रहेको निजी भवनमा सत्याग्रहमा बसेका हुन् । डा. केसीका सहयोगी प्रीतम सुवेदीले बताए अनुसार दिउँसो रक्त परीक्षणलगायतका विभिन्न स्वास्थ्य परीक्षण गराएर केसीले अनसन सुरु गरेका छन् ।
स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधार तथा सुशासनका लागि बेला बेलामा गरिएको अनसनका क्रममा भएका सम्झौताहरु राज्यले बारम्बार उल्लंघन गरेकाले आफू सत्याग्रह गर्न बाध्य भएका डा. केसीले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्रीलगायत सत्तारुढ दलका नेताहरुसँगको लेनदेन र सम्बन्धकै कारण चिकित्सा क्षेत्रमा आर्थिक अपराध गर्नेहरु अहिलेसम्म कानुनको दायरामा नआएको पनि डाक्टर केसीले आरोप लगाए । डाक्टर केसीले २०७५ साउन १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गर्नु पर्ने माग गरेका छन् । यस्तै विश्वविद्यालयमा समेत सुधार गर्नु पर्ने उनको माग छ ।